Tao amin'ny CEMDLAC Analakely no nanatanterahana izany izay nahavory olona marobe tokoa. Samy nahazo ny anjarany avokoa ny mpankafy na ho an’ireo mankafy ny dihy tranainy na ho an’ireo mpianoka tantara tsangana izay samy hita tao daholo. Ho an’ny tantara tsangana manokana raha tsiahivina dia ilay mitondra ny lohateny hoe : "izay mivadika aloha kely ila" no nampiainana mivantana ireo mpankafy. Rtoa Razafindrafidy Maholy Ramarolahy no nanoratra azy. Ny nandrindra azy ho azo lalaovina an-tsehatra kosa dia Ratsimba Ny Aina Hery Zo na i Zou Bloom ary ny nampianatra ny dihy kosa dia Rasoazananiharisoa Voniniaina Bakoly. Tanjon’ny FIMPIMA sampana MIKOLO moa ny hamelona indray ny tantara tsangana amin'ny endrika kabary ka amin'ny 30 novambra ho avy izao indray no fotoana iarahan'izy ireo amin’ny mpankafy rehetra ao anatin’ilay hetsika Vakomanitra Noely.